Dowladda Turkiga oo ergay cusub u magacowday wada hadalsiinta Somaliland iyo dowladda faderaalka – Radio Daljir
Janaayo 1, 2019 7:05 b 0
Dowladda Turkiga ayaa danjiraha Soomaaliya ee dalkaasi Olgan Bekar u magacowday ergayga gaarka ah ee wadahadal siinta Somaliland iyo dowladda faderaalka Soomaaliya.
Magacaabista ayaa waxaa xaqiijiyay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Ambassador Jaamac A. Maxamed oo sheegay in ergayga uu kaalin muhiim ah ka qaatay xoojinta xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Turkiga.
Dowladda Faderaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaan yeelan wax wadahadalo ah tan iyo markii la doortay madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Somaliland ayaa ku doodaysa inay goosanayso xuduudkii Ingiriiska uu sameeyey ee dhulka Soomaaliyeed, inkastoo beelaha ugu badan ee deegaanadaasi ay yihiin Puntland, qaybna ka yihiin dowladda dhexe ee faderaalka.
Muuqaalka Bulshada: Aragtida dadweynaha iyo Xildhibaanada cusub ee Puntland (dhegayso)